Tartanka Hibo iyo Halabuur
+252-2-711708 | info@soydavo.org
SOYDAVO Organizational Profile
in HUB Activities
Ma ku nooshahay Burc0. Ma tahay qof dhalinyaro ah oo leh xirfad halabuurnimo sida 'Curinta Gabayada iyo Maansooyink, Farshaxanka, ama Ciyaar dhaqameedka'. Haddii ay jawaabtu Haa tahay, faldan guji link-an si Aad wax badan uga ogaato. Hay'adda SOYDAVO waxa ay qabaneysaa tartan Hibeed la magac boxy 'Hibo iyo Halabuur'. Waa markii u horreysay ee tartan noocan oo kale ah la ga qabto Gobolka ama se Magaaladda Burco. Tartankani wax uu u furan yahoo oo qudha dhalinyaradda ku cool magaaladda Burco iyo Gobolka Togdheer.
Haddii aad leedahay xirfad ama hibo sida 'Farshaxanka, Curinta Gabayada iyo Maansooyinka, iyo Ciyaar dhaqameedka' oo aad la'ayd meel aad ku soo bandhigto hibadaada halabuurnimo, ha moogaan in aad ka qayb qaadato Tartanka Hibo iyo Halabuur ee Burco.
Tartanka Hibo iyo Halbuur waxaa la gu qabanayaa magaaladda Burco. Sidaas darraadeed waxa uu u furan yahoo oo qudha, dhalinyaradda ku nool Gobolka Togdheer. Xiliga qabashada codsiyadu waxa ay xidhmayaaan 2-da Bisha 11-aad ee 2019. Hal ku dhiga tartanku was 'Nabad iy Wada Noolaansho'.
Haddii aad ka qayb qaadaneysid tartanka gabayada iyo curinta maansooyinka, fadlan soo gudbi maanso ama gabay ku saabsan nabada iyo qiimaheeda inta ka horreysa 2 November, 2019. Waxa aad sidoo kale soo gudbinaysaa CV-gaaga oo ku yaallo addresskaaga iyo taleefan numberkaaga. Sida loo xareynayo xaga hoose ka akhriso.
Tartamayaasha farshaxanka waxaa loo ga baahan yahay in ay soo gudbiyaan CV-gooda oo uu ku yaallo addresskaaga iyo taleefan numbera qofka soo xareysanaya. Waxaa sidoo kale loo ga baahan yahay in ay soo gudbiyaan codsi ay ku qeexantahay sawirada dhaqanka iyo hiddaha bulshadda ka turjumaya ay doonayaan in ay ku tartamaan. Sawir loo ma baahna in qofka xareysanayaa soo gudbiyo hadda. Farshaxanku waxa uu dhacayaa si toos ah (Live).
Tartamayaasha Ciyaaro Dhaqameedka
Ciyaar Dhaqameedka waxaa ku tartami kara oo qudha koox dhisan. Kooxda dhisan waxaa laga rabaa in ay soo gudbiyaan xubnaha kooxdooda, Codsiga kooxda oo uu ku yaallo addresska iyo taleefanka cidda laga la soo xidhiidhayo kooxda sida Guddoomiyaha iyo ku xigeenka. Ciyaaraha la gu tartamayo waa Barriyo iyo ciyaaraha laga ciyaaro goboladda Barriga Somaliland.
Qaabka Xarayshadda Codsiyadda
Waxa aad codsigaaga keenaysaa xafiiska SOYDAVO ee Burco. Xafiisku waxa uu ku yaallaa degmadda Lixle, agagaarka Schoolka Candlelight. Xafiisku waxa uu sidoo kale dhanka galbeed ka xigaa Qibladda Masaajidka Bilaal.
Wixii faahfaahin intaas dheer fadein la xidhiidh Cabdisalaam Cawke +252 63 4361115.
Lihle Village, Burao Somaliland
Email: info@soydavo.org / director@soydavo.org
Tell: +252 63 4482539 / +252 63 4300009
Hargeisa, and Erigavo
Copyright © 2011 - 2022 Somaliland Youth Development & Voluntary Organization - SOYDAVO All Rights Reserved.